I-YALIS Distributor - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
I-Celeste Trade iyi-ejenti emele i-YALIS emakethe yase-Ukraine.Babhekana nabathengisi bendawo yehardware, amawholesale kanye nabakhiqizi beminyango.Kusukela ngo-2017 kuya ku-2019, ngokubambisana kwebhizinisi okungenakuhlukaniswa, siqale ukwethula ukukhuthazwa komkhiqizo wethu e-Ukraine.
I-Anyhotel Vietnam Joint Stock Company ingenye i-ejenti emele i-YALIS emakethe yaseVietnam.Banezinkampani eziyisi-8 sezicabha ezincane eVietnam, ezibhekane nabathuthukisi bezindlu ezithengiswayo ukuze bakhelwe.Siqale ukubambisana kusukela ngo-2014. Njengamanje, i-YALIS yakhe isithombe esithembekile nesamukelekayo esiqhudelana noHafele, Yale, kanye ne-Imuntex.
I-BHM iyi-ejenti yethu emakethe yaseSingapore.Banodumo oluphezulu oluhlinzeka ngehardware yezokwakha yabathuthukisi bezindlu ezithengiswayo.I-YALIS iqala ukukhangisa umkhiqizo wethu eSingapore ngo-2019.
Imakethe yaseNingizimu Korea
Umsabalalisi waseNingizimu Korea we-YALIS Brand, Joil ART wayengumsabalalisi eSouth Korea wemikhiqizo ethile yaseYurophu.Ukuqala ukubambisana nomkhiqizo we-YALIS ngo-2019 futhi uzobamba iqhaza ku-2020 KOREABUILD ngoJulayi ngaphansi komkhiqizo we-YALIS.
Imakethe yaseSaudi Arabia
Itholakala eTaif, idolobha elisentshonalanga eduze kwaseJeddah.I-Co. Door igxile ezintweni zokwakha njengezibambo zeminyango, izingidi ezihlakaniphile, izinto zomnyango, izibambo zekhabethe e-Saudi Arabia.I-YALIS ibisebenzisana ngokusemthethweni ne-Co. Door kusukela ngo-2019.
I-UAB Romida igxile ekukhiyweni, ekubambeni, kumahinge nakwezinye izinsimbi zomnyango we-wholesale kanye nokuhweba okudayisa iminyaka engaphezu kwengu-20 , hhayi eLithuania kuphela, kodwa nakwamanye amazwe.Ukwandisa njalo uhla lwayo olubanzi lwemikhiqizo.I-YALIS kanye ne-ROMIDA baqala ukusebenzisana ngo-2019, futhi i-ROMIDA yaba ngumsabalalisi womkhiqizo we-YALIS eLithuania.